Izindaba - Ingqungquthela ekhethekile
Ngo-3: 30 ntambama ngo-Agasti 7, 2020, inkampani yethu yabamba ingqungquthela enkulu yomkhiqizo omkhulu maphakathi nendlunkulu yaseYongkang. Amabhizinisi aqhamuka embonini yezingxenyekazi zekhompyutha amenywe ngokukhethekile ukuba abe yingqungquthela. Ngaphansi kokuzilungiselela kwethu ngokucophelela, inkampani yethu ikhombise isando sokubhidliza ugesi i-JH-168A 2200W, i-JH-4350AK isando sokubhidliza ugesi, isando sokudiliza ugesi i-JH-150 neminye imikhiqizo emisha kuzethameli
Ekuphishekeleni okuqhubekayo kokusebenza nokusungula izinto ezintsha, ucwaningo lomkhiqizo wenkampani yethu nentuthuko zilandela lo mkhuba, okuvumela ukuthuthukiswa, okwenza uchungechunge lwemikhiqizo eyenzelwe iJiahao kuphela. Ngasikhathi sinye, ekwakhiweni komkhiqizo nasekukhiqizeni ukwenza intuthuko efanelekile kanye nezinto ezintsha. Ikakhulukazi emikhiqizweni kawoyela, siyaqhubeka nokuthuthukisa izinhlobo ezintsha, umsebenzi wokuqikelela, ubuhle, becebo lokuthengisa elizayo, futhi sinikeza iziphakamiso ezihambisanayo, futhi siqondise umkhombandlela wokuthengisa womkhiqizo wesikhathi esizayo.
Ngokuthuthukiswa kwesikhathi esizayo nokuhlelwa kwamasu okuguqulwa kweJiahao, inkampani yethu nayo yenza incazelo eningiliziwe. Ngesikhathi somnotho wobhadane, kufanele siguqule futhi sithuthukise futhi sakhe amamodeli amasha neziteshi ze-e-commerce. Kungale ndlela kuphela lapho singabelana ngezabelo zokugeleza kwemakethe futhi sibone ukuhlangana ngokuwina.
Wonke umuntu wayenomdlandla emhlanganweni. Abasebenza esizeni bachaza ngesineke futhi bakhombisa imikhiqizo emisha, kufaka phakathi ukubonakala komkhiqizo, ukuthi isebenza kanjani kahle, nemininingwane yokwakhiwa, izici, imisebenzi, njll., Ukuze ama-franchisees abe nokuqonda okuphelele komkhiqizo ngamunye futhi aqinisekise izinhlelo zabo kokuhlangenwe nakho.
Siyethemba ukuthi ngalo mbukiso, singadlulisa imininingwane yentuthuko yenkampani yethu yesikhathi esizayo, futhi sifunde kabanzi mayelana nemininingwane yempendulo yemakethe nolwazi lokufunwa kwamakhasimende.